Xalka Smart Home ee qof walba - 13 waxyaalood oo otomatik ah. Guri caqli badan - sidee loo sameeyaa? - SmartMe
9 Febraayo 2020
Markaan qorsheyneyno gurigaaga caqliga leh, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaan qeexno baahiyaheena. Waxaan markaa isweydiineynaa su’aasha aasaaska ah - maxaan ku sameysan karnaa tikniyoolajiyadda noocan ah?
Waxaan ku bilaabi karnaa aaladaha hal soo-saare, ka dib way fududahay in la habeeyo oo otomatiga laga dhigo, laakiin waxay inaga xadideysaa tirada alaabooyinka. Beddelka ayaa ah xalalka guriga caqliga leh ee furan, sida Caawiyaha Guriga, Domoticz ama Open Hub, kuwaas oo bixiya is-dhexgalka badeecada kala duwan ee soo saareyaasha kala duwan, laakiin waxay u baahan yihiin waqti dheeri ah annaga.
Waxaan had iyo jeer ka jawaabnaa su'aalaha ku saabsan badeecooyinka kala duwan ee ka kooban guriga caqliga leh ee otomaatig u noqon kara. Marka waxaan go'aansanay inaan liis garaynno. Liistada xalalka guriga caqliga leh waxay noqon doontaa mid aad u dheer, sidaa darteed waxaan ugu qeybiney qeybo. Maanta waxaan daabacnaa qaybtiisii ​​ugu horreysay.
Maxaan sameyn karnaa si aan u abuurnno guri caqli leh:
Nalalka - waxaan ku sameyneynaa laba siyaabood:
1.1. Markaad iibsaneyso nidaamyada nalalka caqliga leh - laambadaha ama fallaadhaha LED-ka oo "caqli badan" ficil ahaan ka bixi doona sanduuqa. Tusaale waa Philips Hue ama Yeelight.
1.2. Iibsiga darawalada loogu talagay ee kala wareejinta, kuwaas oo markooda lagu daro gasacado. Markaa waxaan ku samayn karnaa iftiin kasta oo caqli leh qiimo hoose. Tusaalooyinka waa aaladda ZAMEL, Sonoff, Shelly, Fibaro.
2. Qaylo dhaan - waxaan isku gayn karnaa alaarmiga si ay ula muuqato aaladaha kale shaashadda caadiga ah. Xalka tusaale waa nidaamka Satel Integrat oo leh barnaamijka 'ETH-1' oo ay taageerto Kaaliyaha Guriga. Kuwani waa aalado caqli gal ah oo kontaroola waxyaabo badan oo guriga caqliga leh oo otomaatig looga dhigi karo.
3. dareemayaal - waxaan guriga u dhigi karnaa dareemayaal badan. Dareemayaasha biyaha daadadka, qiiqa, gaaska, kaarboon moono-oksaydh, beddelista goobta. Dareenkaasi wuxuu noo sheegayaa in wax khaldan yihiin. Markay ogaadaan hanjabaad, si dhakhso leh ayey noo soo wargeliyaan. Dareemayaasha noocan oo kale ah waxay ka imaan karaan Aqara, Fibaro ama soo saareyaal kale.
4. Reed wareegidda iyo dareemayaasha dhaqdhaqaaqa - kuwanu sidoo kale waa dareemayaal, laakiin waxay leeyihiin cod ballaaran. Waxaa loo isticmaali karaa labadaba sidii shey qaylo-dhaan ah (qalabka dareemaha ayaa helay wax) iyo aalad u horseedaya otomatiga. Waxaan galnaa guriga, badhanka caws ayaa la siidaayay oo nadiifiyaha ayaa hadda bilaabmaya. Ama waxaan galaynaa qolka, dhaqdhaqaaqa ayaa la ogaadey, markaa iftiinka ayaa shidmaya. Dareemayaasha noocan oo kale ah waxay ka imaan karaan Aqara, Fibaro ama soo saareyaal kale.
5. Kontaroolayaasha indha indheelaha - kontaroolayaasha indhoolayaasha rolle waxay noo oggolaadaan in aan otomatiga u qaadno kor u qaadista iyo hoos u dhigista indhoolayaasha. Thanks to this, waxaan, tusaale ahaan, si otomatik ah "ugu xiri" guriga oo dhan ama hoos u dhigaa indhoolayaasha ah inta daawashada filim. Soosaarayaasha nidaamyada darawalka waxaa ka mid ah Zamel, Shelly iyo Fibaro.
6. Heerkulka heerkulka iyo huurka, PM 2.5 - noocan ah dareemayaasha ayaa noo soo sheegaya heerka cabiraadaha shaqsiyadeed ee aqalkeena. Waxaan ogaan karnaa heerkulka, boqolkiiba qoyaanimada iyo PM 2.5 fiirsashada. Tani waxay kicin kartaa, tusaale ahaan, firfircoonida nadiifiyaha ama qulqulaha huuriga, kaas oo hagaajiya tayada hawada, iyo sidoo kale raaxada nolosha. Dareemayaasha noocan oo kale ah waxay ka imaan karaan Aqara ama Xiaomi.
7. Soodhadhka casriga ah - saldhigyada caqliga leh waxay noo oggolaanayaan inaan qalabaynno aalad aan lahayn shaqo caqli badan, sida telefishan duug ah ama xaashi. Waxaan awoodnaa in aan damino ama dami karno oo aan hubinno isticmaalka tamarta. Tusaalooyinka saldhigyada waa Xiaomi, Aqara, Fibaro, Smart DGM. Xalka guriga smart ee loo isticmaali karo kaliya maahan ku habboon, laakiin sidoo kale cilmiga deegaanka iyo keydinta.
8. Kontroolka kuleylka - kiiskan, waxaan u xakameyn karnaa kuleylka, labadaba kuwa hooseeya iyo kuleyliyaasha caadiga ah. Thanks to this, waxaan si fog u xakameyn karnaa heerkulka gurigayaga. Tusaalooyinka soosaarayaasha bixiya nidaamka qalabka ee loogu baahan yahay tan waa Tado, Netatmo, Honeywell, Fibaro.
9. Kontoroolka albaabka - iyada oo qayb ka ah xallinta caqliga leh, anagoo si sax ah u dejineyna jaangooyooyinka ku yaal arjiga moobiilka, waxaan meel fog ka maamuli karnaa albaabka laga soo galo ama albaabka garaashka meel fog. Soosaarayaasha alaabooyinka noocan oo kale ah, iyo kuwo kale Zamel iyo Nice.
10. Dhexgalka telefishanka casriga ah ee fiidiyowga - haddii aan rabno inaan iska fogeynno cidda noo timid, waanu sameyn karnaa annaga oo ugu mahadcelineyno fiidiyowga fiidiyoowga smart. Tusaale waa Nice.
11. Qufulka albaabka smart - hadaan rabno inaan albaabadaheena ka fogeynno meel fog, markaa waxaan ku xirxi karnaa quful xariif ah oo ka kooban dareemayaal dhaqdhaqaaqa oo lagu habeeyey caawimaadda dalabka. Soosaarayaasha alaabooyinka noocan ah waa Aqara, Gerda ama Agoosto. Waad ku mahadsan tahay, uma baahnid inaad galiso ama furato furaha albaabka.
12. Robots - sidoo kale faaruqinta ama robotska robots-ku waxay kuxiran karaan otomaatig. Waxaan ku qaban karnaa iRobot, Roborock, Xiaomi ama robots robots.
13. Alaab-bixiyeyaasha iyo huuriyeyaasha-qaybtani sidoo kale waxay kuxiran kartaa gurigeenna caqliga leh. Aaladaha noocan oo kale ah waxaa laga heli karaa bixinta Xiaomi, Philips, Samsung ama Sharp. Sababtoo ah moodooyinka qaarkood ayaa leh qalab dareemayaal dhaqdhaqaaqa, waa la dhaqaajin karaa markii qof qolka galo.
Waxaan ku xiraynaa qeybta koowaad ee liistada lambar 13. Waxaan si xoogan kuugu dhiirigalinaynaa inaad faallo ka bixiso. Ku qor waxa naga maqan liiskayaga. Waan wada abuuri doonnaa. Liisku wuu dheeraan karaa… waana qurux badan yahay!
Sawir ka yimid Thomas Kolnowski na Aadaabta
Sawirro laga soo qaaday Satel, Nice, Netatmo
Xalka guryaha smart waxay leeyihiin faa'iidooyin badan
Sida aad ku arki karto tusaalooyinka kore, iswada otomatiga inta ugu badan ee nolosha guriga ayaa ah mushkilad weyn maanta. Marka laga hadlayo teknolojiyada guriga ee caqliga leh, waxaa sidoo kale mudan in la xuso dhowr faa'iidooyin muhiim ah oo horseed u ah nashqadeynta iyo rakibidda nidaamka guriga caqliga leh. Waa kuwan kuwa ugu sarreeya 5!
Qaar badan oo adeegsadeyaal ah ayaa muujinaya inay jecel yihiin fikradda ah guri caqli badan sababta oo ah suurtagalnimada kordhinta dareenkooda amniga. Xallinta guryaha smart waxay kuu oggolaaneysaa inaad isku-dariso oo aad sii wanaajiso hawlgallada aaladaha caadiga ah ee looga hadlay macnaha guud ee ilaalinta hantida, kamaradaha kamaradaha ama dareemayaasha. Maanta, ma jiro wax dhibaato ah oo weyn oo lagu xakameynayo xaaladda guriga iyadoo la adeegsanayo adeegsiga taleefanka gacanta, xitaa kumanaan kiiloomitir oo ka baxsan aqalka. Wadashaqayn macquul ah oo lala yeesho hay'ad amni sidoo kale waa mid wax ku ool ah maxaa yeelay waxaa jira xalal badan oo lagu taageerayo amniga.
Teknolojiyadaha sida dareemayaasha dhaqdhaqaaqa oo ay weheliso laydh dibadeed ayaa hortaagan ficilada tuugada waxayna leeyihiin waxyaabo ka hortag ah iyo ka hortag. Nidaamka sidoo kale waxaa loo tixgelin karaa macnaha guud ee kahortaga khataraha kale, sida dabka, daadadka ama qiiqa. Dareemayaasha dhaqdhaqaaqa ma aha dareemayaasha kaliya ee u qalma in la maalgashado oo la dhigo guri caqli badan. Xalka dhiirrigelinta ah ayaa sidoo kale ah qalab wax lagu duubo oo otomaatig ah, kaas oo taageera doorka lagu ciyaaro xaaladood ee maqnaanshaha xubnaha qoysku, iyaga oo ku dayanaya "nolol maalmeedka" ka dhacaya dhisme madhan.
Maaha wax qarsoon in tamar la keydiyo iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda guriga ee caqliga leh. Tani waa faa'iido muhiim ah ugu yaraan laba sababood oo aasaasi ah. Marka hore ilaali meeraha. Mawduucani wuxuu noqday midka ugu weyn doodda guud. Adiga oo si taxaddar leh u xulanaya iyo isku-darka xalalka elektiroonigga ah, waxaad yareyn kartaa isticmaalka awoodda, oo sidaas darteed, ku lug leh nashaadyo lagu dhimayo qiiqa waxyeellada leh iyo isticmaalka xad-dhaafka ah.
Marka labaad, waxaad arkeysaa farqiga boorsadaada. Xalalka smart waxay dhaliyaan qiimo gaar ah, laakiin tani waa maalgashi faa iido leh, oo aan aheyn kharash aan faa iido lahayn. Si macquul ah loo xushay oo si ku-habboon loogu rakibay aaladaha iyo isku-darka ayaa yareeya ajuurada go'an. Intaa waxaa u dheer, aaladaha lagu xakameeyo codsi wareega ayaa dhiirigeliya isla markaana u jihaynaya maalgashiyo dheeraad ah oo wax lagu kaydiyo. Tusaale ahaan, dad badani waxay go'aansadaan inay galaan dunida ilaha tamarta la cusboonaysiin karo oo ay iibsadaan mashiinnada cadceedda ama matoorrada kuleylka. Teknolojiiyada cilmiga farsamada ayaa sidoo kale lagu dari karaa nidaamka.
Faa'iidada muhiimka ah ee nolol maalmeedka guriga smart ayaa ah sida fudud fudud. Ujeedada otomatiga waa in la fududeeyo howlaha oo laga jaro fasalada dadka. Kordhinta ku habboonaanta adeegsigu waa shaqada koowaad ee qayb weyn oo ka mid ah hal-abuurka teknoolojiyadda. Marka qof weydiiyo: "Maxaad ugu maalgelinaysaa xalka guriga caqliga leh haddii aysan nolosha lagama maarmaanka u ahayn?", Waxaad si fudud uga jawaabi kartaa adduunka: "raaxadaada kuu gaarka ah!"
Runtii, hawlo yaryar oo aad mooddo inay yar yihiin fiirsanaanteena iyo tamarkeena. Dhanka kale, daryeelida caruurta iyo qoyska, socodsiinta meheraddaada ama howlo fara badan oo maalinle ah ayaa ahmiyada koowaad u leh howlaha adag, ee hal-abuurka leh. Caqli leh, walxaha shakhsiyadeed ee nidaamka, tusaale ahaan, furida albaabka ama albaabka, deminta nalalka ama dejinta heerkulka ayaa raaxo leh iyo faa iidooyinkooda weyn.
Waxaa jira faa iidooyin muhiim ah oo la mid ah marka loo eego ku habboonaanta, taas oo ah waqtiga badbaadinta. Haddii aan tixgelinno liiska waxyaabaha otomaatiga ah ee la taxay, i.e. iftiinka, xakameynta dareemayaasha iyo qaylo-dhaanta, xakameynta albaabka, nadiifinta hawada iyo waxyaabo kaloo badan, waxaan arki doonaa inta waqti lagu keydin karo isku-habeyn hal mar ah.
Bal ka fikir gurigaaga caqliga badan ee aan ku khasaarin daqiiqadaha qaaliga ah ee kor u qaadista iyo hoos u dhigista daahyada, badalida laydhka, kala goynta ilaha tamarta, hubinta waxyaabaha nidaamka amniga ama u soo dhowaanshaha albaabka. Xitaa haddii aadan ku noolaan nolol leh jadwal aad u mashquul badan, waxaad ka heli doontaa nashaadyo aad u xiiso badan oo aan ka ahayn kuwa ugu badan ee prosaic-yada, oo qayb badan ka qaata waqtigaaga firaaqada ah.
Waxa intaa dheer oo mudan in lagu xuso macnaha guud ee guriga caqliga lihi waa dabeecaddeeda guud. Hirgal kastaa runti waa tayo cusub. Suurtagalnimada in la isbarbardhigo daraasiin xalal ah, ma aha oo kaliya deegaanka gudahooda ee hal soo-saare (tusaale ahaan Xiaomi), waxay abuurtaa rajada ugu badnaan shaqsiyeed.
Waa maxay waxa intaa ka sii badan, farsamada guriga ee caqliga leh waa la bedeli karaa. Waqti kadib, waxaad arkeysaa waxyaabo dheeraad ah oo suurtagal ah oo ku soo kordhinaya nidaamka, adoo sii kordhinaya qadarinta iyo dareenka amniga ee umuuqda waxyaabo yaryar oo muuqda. Markaa looma baahna inaad ku maal gasho qalabka xoqista. Waxaad ku dari kartaa shey halxilayaal la xaqiijiyay, ama waxaad ka takhalustaa midka aadan u baahnayn.
Teknolojiyada guryaha casriga ah loo soo saaray xitaa sanad ilaa sanadka, laakiin bil ilaa bil. Liiskeenna ah 13 waxyaabood oo si otomaatig ah u samayn doona ayaa dhowaan u baahan doona in lagu dhammaystiro qalabyada kale. Tani waa hannaan lama huraan ah oo mudan in la raaco oo lagu hagaajiyo gurigaaga nidaamyada ugu wanaagsan.
LG bandhigyo hufan ayaa tagaya magaalooyinka badankood?
lg, guriga smart, bandhigyo
LG waxay dhowaan la timid fikrado dhowr ah oo hal-abuur leh. Midkood waa soo jeedinta ah in mustaqbalka magaalooyinka caqliga lihi ay ku saleysnaadaan bandhigyo OLED oo hufan. Bilawga, makhaayadaha? LG wuxuu damacsan yahay inuu adeegsado bandhigyo OLED oo hufan, iyo kuwo kale ...